သံလိုက်လက်ဆောင် Box ကိုလက္ကား
ကုန်ပစ္စည်းန့်သတ်ချက်များနည်းပညာဆိုင်ရာအချက်အလက်များ Ref. ပစ္စည်း C2S အနုပညာစက္ကူစက္ကူစက္ကူ Kraft Paper Greyboard 128gsm 120gsm 120gsm 600gsm မှ 1000gsm 157gsm 150gsm 150gsm 1100gsm မှ 2000gsm အရွယ်အစားအရှည် * အကျယ် * အမြင့် (ဖောက်သည်ရဲ့လိုအပ်ချက်အရသိရသည်) တောက်ပ / Matte Lamination ပြီးစီး, ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်, Aqueous ကုတ်အင်္ကျီ, ချစ်ခြင်း, ရွှေ / ငွေတံဆိပ်တုံးခုတ်ယူခြင်း / ဖောင်းကြွ,…
ကုန်ပစ္စည်း Parameters ကုန်ပစ္စည်းအမည်စိတ်ကြိုက်မျက်နှာပြင်ပုံနှိပ်ခြင်းလိုဂိုဖြူအလယ်အလတ်အရွယ်အစားသံလိုက်ခေါက်လက်ဆောင်သေတ္တာကုန်ကြမ်းစက္ကူပြား (1မီလီမီတာ, 1.5မီလီမီတာ, 2မီလီမီတာ, 2.5မီလီမီတာ, 3မီလီမီတာ) အနုပညာစက္ကူ (128gsm,157gsm …စသည်တို့ဖြစ်သည်) MOQ 1000pcs အရွယ်အစားစိတ်ကြိုက်အရောင်ကျွန်ုပ်တို့သည် Pantone အရောင်များကိုမူရင်းအနက်ရောင်ကိုပုံနှိပ်နိုင်သည်, အဖြူရောင်, ရွှေနှင့်ငွေရောင်အရောင်ပုံနှိပ်ခြင်းအော့ဖ်စက်ပုံနှိပ်ခြင်း, ပိုးမျက်နှာပြင်ပုံနှိပ်ခြင်း ...
ကုန်ပစ္စည်း Parameters ကုန်ပစ္စည်းအမည်ဖက်ရှင်လက်လုပ်ဇိမ်ခံထုံးစံအမှတ်တံဆိပ်ကိုယ်ပိုင်ထုပ်ပိုးသံလိုက်လက်ဆောင်သေတ္တာကုန်ကြမ်းစက္ကူ (1မီလီမီတာ, 1.5မီလီမီတာ, 2မီလီမီတာ, 2.5မီလီမီတာ, 3မီလီမီတာ) အနုပညာစက္ကူ (128gsm,157gsm …စသည်တို့ဖြစ်သည်) အရွယ်အစားစိတ်ကြိုက်အရောင် Pantone အရောင်မူရင်းအနက်ရောင်ကိုမည်သည့် print မဆိုစိတ်ကြိုက်ပြုပြင်နိုင်သည်, အဖြူရောင်, ရွှေနှင့်ငွေရောင်အရောင်ပုံနှိပ်ခြင်းအော့ဖ်စက်ပုံနှိပ်ခြင်း, ပိုးမျက်နှာပြင်ပုံနှိပ်ခြင်း Surface Disposal …
ကုန်ပစ္စည်း Parameters ပစ္စည်းလက်ခတ် Lid ထုပ်ပိုးကတ်ထူပြားထုပ်ပိုးထားသော Custom Magnetic Closure လက်ဆောင်သေတ္တာနှင့်မြှုပ်ထည့်ပစ္စည်းများ Kraft paper,စက္ကူဘုတ်, အနုပညာစက္ကူ,မြှောင်းပုံဘုတ်အဖွဲ့,စက္ကူ coated, အရွယ်အစား(L ကို * W * H ကို) ထုံးစံအရောင် CMYK litho ပုံနှိပ်ခြင်းလက်ခံပါ, Pantone အရောင်ပုံနှိပ်ခြင်း, သင်၏တောင်းဆိုမှုအဖြစ် Flexo ပုံနှိပ်ခြင်းနှင့်ခရမ်းလွန်ပုံနှိပ်ခြင်းအပြီးသတ်ထုတ်ယူခြင်းအရာဝတ္ထု / Matt Varnish, Glossy / Matt Lamination, ရွှေရောင်
နည်းပညာဆိုင်ရာအချက်အလက်များ Ref. Material C2S Artpaper Texture Paper Kraft Paper Greyboard 128gsm 160gsm 120gsm 600gsm to 1000gsm 157gsm 150gsm 150gsm 1100gsm to 2000gsm Size Length * အကျယ် * အမြင့် (ဖောက်သည်ရဲ့လိုအပ်ချက်အရသိရသည်) Printing CMYK or Pantone Offset Print or Screen Print or UV Offset Print Finishing Gloss/ Matte Lamination,…
စိတ်ကြိုက်စက္ကူထုပ်ပိုးခြင်းစက်ရုံအိပ်ယာခင်းထုပ်ပိုးခြင်းအတွက် Bespoke တင်းကျပ်သောသံလိုက်လက်ဆောင်သေတ္တာ
Product Name Custom Paper Packaging Box Factory Bespoke Rigid Magnetic Gift Box for Bedding Set Packing Material Paperboard (1မီလီမီတာ, 1.5မီလီမီတာ, 2မီလီမီတာ, 2.5မီလီမီတာ, 3မီလီမီတာ) အနုပညာစက္ကူ (128gsm,157gsm …စသည်တို့ဖြစ်သည်) Size Customized Color CMYK or Pantone color Printing Offset printing, silk screen printing Surface Disposal Glossy varnishing, Glossy lamination, Matte အလွှာ, ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်, Embossing…